ओकिनावा किन जाडो महिनामा जादा उत्तम हुन्छ | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > OTHER > ओकिनावा किन जाडो महिनामा जादा उत्तम हुन्छ
म जापान आउनु अगाडी ओकिनावाको ’boutमा खासै सुनेको थिईन। मलाई यो ठाउ छ भन्ने कुरा चाहि अंग्रेजी को किल बिल र कराते किड हेरेको भएर थाहा थियो। जब म जापानमा बस्न भनेर आए मलाई लागेको थिएन कि यहाँ पनि हवाईको जस्तो ट्रपिकल क्लाईमेट होला भनेर। हुन पनि जापन देश बसन्तको साकुरा फुलको लागि र हिउदको हिउ र तातो ओन्सेनकोलागि प्रशिद्द ठाउ हो। धेरैले ओकिनावालाइ जापान संग जोड्न पनि बिर्सिन्छन।। त्यसैले मलाई लाग्छ कि घाम, समुन्द्र र बालुवाको अनुभब लिनु पर्यो भने म थाईल्याण्ड, फिलिपिन वा मलेसिया तिर जाउ।
तर तिन घण्टाको टोकियोको ब्यस्त शहरबाटको फ्लाईटमा म निकै भिन्न ठाउमा पुगे। यो ठाउले मलाई टिपिकल जापान भन्दा फरक बातावरण संग घुलमिल हुने मौका दियो। ओकिनावा जापानमा लुकेको एउटा हिरा हो। मैले यो भनिरहदा मलाई पत्याउनु होस्। यो ठाउमा हजुरले टोकियो तिर महसुस गर्न नसकिने अनेकौ अनुभब पाउन सक्नु हुनेछ।
यदि हजुर जापानमा हुनु हुन्छ र ट्रपिकल ठाउमा जना चाहनु हुन्छ भने ओकिनावा हजुरको बेस्ट अप्सन हो। हिउदमा जापानको सबै तिर चिसो मौसम हुदा त झन् ओकिनावा जादा झन् उत्तम किनकि ;
हिउदमा ओकिनावाको मौसम प्रिय छ। अरु बेला याहा हजुरले मनसुन हुने र आंधीबेरी को सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर हिउदमा यो ठाउमा ताईफ़ुको डर हुन्न। यहाँको मौसम गर्मि याम मा निकै तातो हुन्छ भने हिउदमा न्यानो हुन्छ। हिउदमा यो ठाउ खासै ह्युमिड पनि हुन्न। तेसैले साईट हेर्न यो मौसम निकै राम्रो छ।
म जनवरीमा ओकिनावा भ्रमण गर्दै थिएँ र म आफ्नो टीशर्ट र शर्टमा टापुहरूको वरिपरि घुम्दै थिएँ। त्यसपछि दिउँसो सम्म साइकल यात्रा गर्दै थिए। मैले मानिसहरूलाई क्याम्पिंग, स्नोर्कलिंग, सेलिङ्ग र सनबाथिंग गरेको देखें। त्यो जनवरीमा थियो जब यो ओकिनावामा सबैभन्दा चिसो महिना जनवरीलाइ मानिन्छ। यो यात्रा मेरो लागि टोकियोको निकै चिसो मौसम बाट राहतको एक हप्ता थियो।
यो कुरा चाहि हिउदमा मात्र नभएर वर्ष भरिनै लागु हुन्छ होला। यहाँको खाना निकै मिठो हुन्छ। तर चिप चिप गर्ने गर्मीमा सबैको खानाको एपेटाइट घटेको हुन्छ। जाडोमा यहाँ २० डिग्री सेल्सिअस हुने भएकोले धेरै खान मन लाग्न सक्छ।
ओकिनावा कुजिन जापानको अन्य ठाउमा पाउने परिकार भन्दा निकै भिन्न हुन्छ। बेल्गो हुन्छ भन्दैमा नमिठो भनेको हैन, मैले माथि नै लेखि सके कि यो परिकार निकै मिठो हुन्छ। ओकिनावाको खानामा फ्रेश माछा, गगटा, ओइस्टरहरु धेरै हुन्छ। ओकिनावामा पाइने तरकारी जस्तै करेला, तारो, समुन्द्री अंगुरहरु प्रयोग गरेर पनि यहाँको परिकार बन्छ।
ओकिनावा बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरूको लागि पनि प्रसिद्ध छ, आंशिक रूपमा अमेरिकी सेना त्यहाँ रहेको कारण एउटा प्रसिद्ध परिकार भनेको ‘टाको राइस’ हो, जुन चामल, मासु, चीज, साल्सा, नाचोस, सिमी, र मसलाको स्वादिष्ट मिश्रण हो।
३. गर्न सकिने कार्य
ओकिनावामा के गर्न सकिने एक्टिभिटि धेरै छ। सूची अन्तहीन छ, तर केहि उदाहरणहरू दिनको लागि, तपाईं आफ्नो बिदामा सफा निलो पानीमा स्नोरकेलिंग, व्हेल हेर्ने, केही टापुहरूको साइकल यात्रा गर्ने, क्याम्पिंग गर्ने, कार भाँडामा लिएर सडक यात्रा गर्ने, स्कूबा डाइभिन, वा त्यतिकै टापु घुमेर बस्न सक्नु हुनेछ।
यी सबै कुरा हजुरले हिउदमा पनि गर्न सक्नु हुनेछ। हिउदमा यी कार्य गर्नुको अर्को फाइदा भनेको यहाँ धेरै मानिसहरु नहुनु पनि हो। हजुरले एउटा काम गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुर कुनै ट्राभल कम्पनि बाट जादै हुनु हुन्छ भने त्यो कम्पनीले यी कार्य गराउछकि नाइँ सोध्नु होला। क्यापिंग र स्कुबा डाईभिङ्ग भने वर्ष भरि खुला हुनेमा म बिस्वस्त छु
४. यहाका मानिस
ओकिनावाका स्थानीय व्यक्तिहरू मेरो जीवनमा मैले भेटेका सबै भन्दा मित्रवत व्यक्तिहरू हुन । तिनीहरू खुशी, र आरामदायी देखिन्छन्। यस ठाउँमा एक टापुको भावना छ र यो संक्रामक हो। व्यक्तिहरू तपाईंसँग कुरा गर्न उत्सुक हुनेछन्, तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ, र तपाईंको यात्राको ’boutमा र तपाईं किन जापानमा हुनुहुन्छ भन्ने ’bout पत्ता लगाउन खोज्छन।
तिनीहरू सधैनै आत्मिय छन् होलान। तर म भन्छु कि जाडोमा आगन्तुकहरू कम हुँदा, वातावरण अझ रमाइलो हुन्छ र स्थानीयहरूले आगन्तुकहरूलाई भेट्न बढी समय पाउँछन्।
यदि तपाईं रातमा बाहिर जानुहुन्छ, विशेष गरी कोहाकुसाई-डोरी, नाहा शहरको मुख्य पार्टी सडकको वरिपरि, तपाईं धेरै व्यक्तिलाई भेट्नुहुनेछ र सजिलैसँग विभिन्न स्थानीय बारहरूमा भ्रमण गर्न र कुराकानी गर्न वा स्थानीयहरूसँग वाईन टोस्ट गर्न व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ। लजालु नहुनुहोस्।
यो सामान्य ज्ञान हो कि जापान कुनै पनि हिसाबले एशियामा सस्तो ठाउँ हैन। तपाईं उस्तै सस्तो होटेलहरू र स्ट्रीट फूडको आशा गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाईं दक्षिण पूर्व एशियामा रमाउनुहुनेछ। यद्यपि जापानबाट ती ठाउँहरूमा उडान गर्नु सस्तो पनि छैन।
विशेष गरी जाडोको बिदाको मौसममा, एयरलाइन्सले टोकियो र अन्य मुख्य शहरहरूमा आउने उडान टिकटहरू डबल वा ट्रिपल गर्न मनपराउँदछन्। जापानबाट बाहिर निस्कन लगभग असम्भव छ, जब सम्म तपाईं आफ्नो सबै बचत खर्च गर्नुहुन्न, चिट्ठा जित्न सक्नुहुन्न, वा सान्ताबाट निःशुल्क टिकट पाउनुहुदैन।
यद्यपि ओकिनावा पुग्न अझै पनी अपेक्षाकृत सस्तो हुन सक्छ, यो दोब्बर मूल्य भए पनि, किनकि यो केवल छोटो घरेलु उडान हो र धेरै कम लागती एयरलाइन्सले सेवा गर्दछ।
ओकिनावाको अफ़िसिअल पर्यटक वेबसाईट